Akụkọ Ụwa – Page 7 – Ụwandịigbo
Category: Akụkọ Ụwa
Ndị Uweojii Nọ nʻAba Aghọọla Nkịta Tara Ọkpụkpụ A Nyawara Ha nʻOlu
Posted May 19, 2019 May 19, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ndị bi nʻala Enyimba bụ Aba, etiele mkpu tikuo ụwa niile na-akọwa na ndị uweojii nọ na mba ahụ na ndị omekome bụzị ara na obi. Ha sịrị na ebe ọ kache ewute ha bụ na ndị ohi, ndị soja na ndị Uweojii dịzị ka ha na-egbunye nʻotu akpa. Ụfọdụ nʻime ha sịrị na ọ bụ egbe ndị uweojii ka ndị abalịdịegwu a ji eje […]
Ọdụ Ụgbọelu Dị nʻEnugwu Nwere Ike Imechi
Posted May 17, 2019 May 17, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Onyeisi na-ahụ maka mjem ụgbọelu na Naịjirịa bụ Maazị Hadi Siraka ekwuole na ọdụ ụgbọelu dị nʻEnugwu, nke a na-akpọ Akanu Ibiam International Airport, nwere ike imechi na nso nso. O kwuru na ihe ga-ebute mmechi a bụ na ọdụ ụgbọelu ahụ adịghị etu o kwesiri ịdị. Nʻezie, ọtụtụ ndị merele mjem site nʻọdụ ụgbọelu ahụ kwuru na o riri mperi nʻebe dị iche iche. Ụfọdụ sịrị na ọdụ ụgbọala […]
Gọvanọ David Umahi Nke Ebọnyị Abụọla Ndị Otu Nzuzo Ọnụ
Igbo sịrị oke amana ụma taa akpa dibịa, ma dibịa amana ụma bụọ oke ọnụ. Mana Gọvanọ David Umahi na-achị Steeti Ebọnyị abụọla ndị otu nzuko dị iche iche na steeti ya ọnụ. Gọvanọ Umahị gwara ndị ụlọ na-emebe iwu na steeti ahụ na onye otu nzuzo ọbụla ewepughị aka enwe nʻofe tupu abalị asaa ga-ahụ ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme. Gọvano Umahi kwuru nke a mgbe ọ […]
Maazị Nwankwọ Kanu Amalitere Ebe Ọzụzụ Ndị Egwu Bọọlụ
Ihe ọ sọrọ sị mee enwe, anya ga-atọrịrị ya nʻelu osisi. Ọ bụ eziokwu na Maazị Nwankwo Kanu kụchara egwuregwu bọọlụ laa ezumike, uche ya ka nọkwa nʻegwuregwu bọọlụ. Ọ bụ ya mere Maazị Kanu jiri malite ebe a na-azụpụta ndị chọrọ iji egwuregwu bọọlụ aracha aka. Ụlọ egwuregwu ahụ nke a kpọrọ Kanu International Football Academy (KIFA) nwere ngalaba iri abụọ na Naịjirịa mana isiụlọọrụ ha dị na Legọọsị. […]
Maazị Christian Chukwu Awụchiele na Lọndọnụ Ịgwọ Onwe Ya
Otu onye ụkwụ ya na-aghọ nkọ ka agụwa nʻegwregwu bọolụ, onye nke bụkwa onyendu ndị egwuregwu bọọlụ Green Eagles nke Naịjirịa mgbe elu bụ ala ọsa, bụ Maazị Christian Chukwu, awụchiele na Lọndọnụ ka a gwọọ ya ọrịa jidere ya. Maazị Christian Chukwu, nke e jiri Chairman were mara, na nwunye ya bụ Lilian Nkeiruka, rutere Lọndọnụ ka ndị dibịa Bekee ihe mere ya bụ agadi nwaanyị ka ọ dị […]
Mahadum Nnamdị Azikiwe Enweele Onyeisi Ọhụrụ
Posted May 16, 2019 May 17, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Mahadum Nnamdị Azikiwe dị nʻỌka enweele onyeisi ọhụrụ nke aha ya bụ Ọkankuzi Charles Esimone. Ọkankuzi Esimone meriri mmadụ iri atọ na asaa ndị ọzọ chọrọ ọrụ ahụ were bụrụ ọkaibe. Ọ ga-anọ nʻọkwa ahụ afọ ise. Onyeisi mgbasaozi Mahadum ahụ bụ Ọkaa Emmanuel Ojukwu siri na ọ bụ eziokwu na mmadụ iri atọ na asatọ zọrọ ọkwa ahụ, naanị mmadụ asaa bụ ndị maara ihe ekwe na-akụ. Ọchịchị […]
Arụ Emeela n’Agụleri
Posted May 16, 2019 May 16, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ndị ichie nʻAgụleri agwala mmadụ anọ si nʻobi Eze Idigo ka ha were ihe karịrị otu nde naira na ọkara were kpụọ arụ nʻihi nsọala nke ha mere na mba ahụ. Nke a na-eme mgbe a họpụtachara eze ọhụrụ na mba ahụ. Mmiri malitere gbarụwa nʻAgụleri mgbe eze na-achị obodo ahụ, bụ Eze Christopher Nwabụnwanne Idigo, nwụrụ ka ọ chịchara mba ahụ ihe karịrị iri afọ abụọ na anọ. Ka […]
Awụsa Na-Achị Ehi Awakpola Obodo Gọv Okowa na Steeti Delta
Posted May 15, 2019 May 16, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Nwata nna ya zuru ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ndị Awụsa emekwele ka ha si eme. Na nke ugbu a, ha wakporo obodo Owa-Alero dị nʻokpuru ọchịchị Ịka na Steeti Delta. Owa-Alero bụ obodo gọvanọ na-achi Steeti Delta bụ Maazị Ifeanyị Okowa. Ndị osochiegbu a jiri mma bọọ, ka a na-abọ anụ ọhịa, otu nwaanyi na-achụ nta ihe ọ ga-eri nʻugbo ya. Nwaanyị a bụ Odoziakụ Jomo Nwahmdi dịzị ka […]
Gọvanọ Obiano Ekwela Nkwa Nde Naịra Ise Maka Onye Gbara Ama Gbasara Ọnwụ Maazị Igboka
Posted April 18, 2019 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Aka na achị Steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obiano, ekwela nkwa na a ga-enye onye ọbụla gbara ama gbasara ọnwụ Onyeisioche ndi Nimo, bụ Maazị Frank Igboka, nde naira ise dịka ihe nrite. Onyeisi ụlọọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi nʻAnambara bụ Maazị Don Adinuba kwupụtara nke a mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ọ sịrị na ọnwu Maazị Igboka wutere Gọvanọ Obiano nke ukwu nke mere o jiri […]
Nkwado Maka Ụbọchị Ndịigbo Ebirile Ọkụ na Boston
Posted April 16, 2019 April 16, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa, Mmemme
Ndị Igbo bi na Boston, Massachusets nke dị na mba Amerika akwadowele maka mmemme ha ji akwalite omenala Igbo. Mmemme a nke ha kpọrọ Ụbọchị Ndịigbo bụ mmemme ha na-eme kwa afọ nʻama egwuregwu Franklin Park nke dị na Boston. Mmemme nke afọ 2019 ga-adị nʻụbọchị ọnwa Ọgọịsịtị ga-adị na mkpụrụ ụbọchị iri. Nʻokwu ya mgbe ọ na-akọwa maka mmemme a, Eze Ndịigbo na Boston bụ Okaa Ejike Eze (Omenka […]